Xeerka anshaxa ee Ruby ayaa la beddelay sababtoo ah kaftanka jinsiga ee liisaska boostada | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | 03/10/2021 11:52 | La cusbooneysiiyay 07/10/2021 04:53 | Noticias
Hadda waxaan bilaabeynaa inaan aragno isbedelo kala duwan kuwaas oo ka dhashay qanacsanaan la'aan, xanaaq iyo xitaa gardaro la xiriira luqadda iyo sida dadku caadi ahaan isu muujiyaan. Mana aha wax aan hore loo taaban, laakiin hadda tani waxay bilaabatay inay saamayn weyn yeelato oo wax walba ka sarreeya, kuwo badan ayaa durba bilaabay inay codkooda kor u qaadaan.
Tan waxaan ku qiyaasi karnaa inaan ka hadlayno luuqad loo dhan yahay taasoo dhalisay dhaqdhaqaaqyo badan iyo dhammaan fikradaha kala qaybsan, laakiin runtu waxay tahay in gunta hoose waxa la raadinayo ay tahay ixtiraam iyo takoor la'aan.
Taasina waa kahadalkeeda waxaa jiray dood dhowaan dhexmartay xubnaha Ruby Twitter -ka iyo GitHub taas oo ka -qaybgalayaasheedu ay ku caddeeyeen mawqifkooda iyo fikradahooda ku saabsan isbeddelka lagu sameeyay Xeerka Anshaxa ee mashruuca Ruby, kaas oo qeexaya mabaadi'da is -gaarsiinta saaxiibtinimo iyo ixtiraam leh ee bulshada soo -saaraha.
Gudaha wax ka beddelka kuwaas oo la fuliyay, waxa soo socda ayaa lagu xusay:
Qodobkii qeexayay dulqaadka fikradaha ka soo horjeeda ayaa meesha laga saaray.
Weedha tilmaamaysa habdhaqan soo dhaweyn leh oo ku wajahan dadka bilowga ah, ka-qaybgalayaasha dhallinyarada ah, macallimiintooda iyo kuwa la midka ah ee ah "saaxiriinta neef-dabka ah" (laga yaabee dadka aan ka koobnaan karin shucuurtooda) ayaa lagu beddelay mid guud, oo u qoraya hab-dhaqanka noocaas ah dhammaan adeegsadayaasha.
Qodobka dhibaataynta wuxuu ku kooban yahay oo keliya qaybaha la ilaaliyo, laakiin ka-qaybgalayaashu way isku afgaran kari waayeen tan macneheedu yahay: tusaale ahaan, haddii ka-reebitaanka xusa jinsigu mamnuuc yahay ama kuwa aan caddaanka ahayn oo keliya.
Weedha ah in ereyada iyo ficilladu ay u dhigmaan ujeedo wanaagsan waxaa kaabaya xaqiiqda ah in ka -qaybgalaha uu fahmo in ujeeddooyinka iyo cawaaqibta ficilladu ay kala duwanaan karaan.
Isbeddellada noocan oo kale ah ayaa lagu sameeyaa xeerka anshaxa ayaa loo sameeyay si looga ilaaliyo xubnaha mashruuca inay ka gudbaan doodaha farsamada una gudbaan dagaallo iyadoo lagu saleynayo kala aragti duwanaanshaha iyo in laga fogaado hadalada meel ka dhaca ku ah dadka qaar iyadoo la huwan yahay aragti ka duwan.
Gaar ahaan sababta isbeddelka koodhku wuxuu ahaa farriin ka timid qof ku cusub liiska boostada ku saabsan khalad xagga qiimeynta weedha "Date.today +1". Qoraaga daabacaadda ayaa ku kaftamay in khaladka noocaas ahi uu ku jiro gacmaha dumarka aan jeclayn inay muujiyaan da’dooda dhabta ah.
Aad ayaan uga xumahay liiska boostada Ruby xilligan. Xubin cusub ayaa sameeyay kaftan jinsi ah waxaana lagu eedeeyay inaysan habboonayn. Waxaa hadda jira mawduuc ka doodaya nuxurka dhaqanka, kaftanka, iyo dhammaan sababaha aysan wax weyn u ahayn.
Jawaabta, Eedeymaha jinsiga, aflagaadada iyo dhaleeceynta ayaa hoos ugu soo dhacay aqbalid la'aanta kaftanka dadka nugul. Isticmaalayaasha kale waxay dareemeen in kaftanku uusan ahayn wax gaar ah, falcelinta weerarka ah ee ka qaybgalayaasha qaarkood ee kaftanka ayaa laga yaabaa inay tahay mid aan la aqbali karin kaftanka laftiisa.
Wuxuu gaaray heerkii kama dambaysta ahaa isagoo damacsan inuu joojiyo isticmaalka liisaska boostada haddii kaftanka noocaas ah loo arko mid la aqbali karo.
Kuwa ka soo horjeeda beddelidda xeerka waxay rumeysan yihiin in wakiillada dhaqammo kala duwan ay matalayaan bulshada dhexdeeda iyo kuwa aan ku hadlin Ingiriisiga aan laga filan karin inay ogaadaan dhammaan nuxurka saxnaanta siyaasadeed ee qof kale.
Waxaa sidoo kale laga baqayaa in isbeddellada ay aasi doonaan awoodda muujinta nooc kasta oo kaftan ah, maadaama kaftan kasta ay hubaal ahaan doonto qof xanaaqsan.
Intaa waxaa dheer, sababtoo ah aragtida mugdiga ku ah bulshada dhexdeeda, qorayaasha isbeddellada waxay codsanayaan in la baajiyo ama lagu beddelo shuruud ah in la isku dayo inaan la bilaabin wada -xaajoodyo siyaasadeed iyo kuwo kale oo "schismatic" ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Xeerka anshaxa ee Ruby wuu isbedelay sababtoo ah kaftanka jinsiga ee liisaska boostada